သင်္ချာဝေါဟာရမော်ကွန်း - ကလေးများများအတွက်အွန်လိုင်းအဘိဓါန်
ဇြန္လ 30, 2017 ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
12 လက်မ (အတွင်း။ ) = 1 ခြေလျင် (ပေ)
။ = 36 ပေ =3ခြံ (ကိုက်) တွင် 1
5280 ပေ = 1760 = 1 မိုင် (မိုင်) ကိုက်
144 စတုရန်းလက်မ (in.2) = 1 စတုရန်းပေ (ft2)
9 ft2 = 1 စတုရန်းခြံ (yd2) = 43,560 ft2
4840 yd2 = 1 ဧက (က)
1728 ကုဗလက်မ (in.3) = 1 ကုဗခြေလျင် (ft3)
27 ft3 = 1 ကုဗခြံ (yd3)
8 အရည်အောင်စ (FL အောင်စ) = 1 ခွက်ကို (ဂ)
2 က c = 1 ပိုင့် (PT)
2 PT = 1 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး (Qt)
4 Qt = 1 ဂါလံ (Gal)
16 အောင်စ (အောင်စ) = 1 ပေါင် (ပေါင်)
2000 ပေါင် = 1 တစ်တန် (t)
ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (° F)
32 ° F ကို = ရေခဲမှတ်
F ကို = ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဒီဂရီ 98.6
ရေက F = ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်° 212
1 ခြေလျင် = 12 လက်မ
1 ခြံ =3ခွကေို
1 ကွတ်ထုတ်ယူ =2ပိုင့်
1 ဂါလံ =4ကွတ်ထုတ်ယူပြီး
1 ပေါင် = 16 အောင်စ
1 လက်မ = 2.54 စင်တီမီတာ
1 လီတာ = 1.06 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး
1 ကီလိုဂရမ် = 2.2 ပေါင်
အရည်အောင်စ 29.57 ဂရမ်
အောင်စ (ခွောကျသှေ့) 28.35 ဂရမ်
ဂရမ် 0.0353 အောင်စ
ဂရမ် 0.0022 အလေးချိန်ပေါင်
ကီလိုဂရမ် 2.21 အလေးချိန်ပေါင်
အလေးချိန်ပေါင် 453.6 ဂရမ်
အလေးချိန်ပေါင် 0.4536 ကီလိုဂရမ်
ကွတ်ထုတ်ယူပြီး 0.946 လီတာ
ကွတ်ထုတ်ယူပြီး (ခွောကျသှေ့) 67.2 ကုဗလက်မ
ကွတ်ထုတ်ယူပြီး (အရည်) 57.7 ကုဗလက်မ
တိုက်ရိုက် 1.0567 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး
ဂါလန် 3,785 ကုဗစင်တီမီတာ
ဂါလန် 3.785 လီတာ
1 dash6ပေါက်
24 ပေါက် 1 /4Tsp
1 tbsp 1 /2အရည်အောင်
2 tbsp 1 အရည်အောင်
2 ခွက် 16 အရည်အောင်စ (1 ပိုင့်)
3 tbsp 1.5 အရည်အောင်စ (1 jigger)
1 /2ခွက်ကို4အရည်အောင်စ
16 tbsp 1 ခွက်ကို
1 ခွက်ကို 8 အရည်အောင်စ (1 /2ပိုင့်)
2 ပိုင့် 1 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး
4 ကွတ်ထုတ်ယူပြီး 1 ဂါလံ
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား သင်္ချာဝေါဟာရ1 မှတ်ချက်
ဇြန္လ 30, 2017 အောက်တိုဘာလ 23, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
အပိုင်း = ရာခိုင်နှုန်း X ကိုလုံး
နမူနာ: 32 ၏ 25% ကဘာလဲ? Setup ကို: အပိုင်း = .32 X ကို 25
နမူနာ: 15 သောအရာကိုအရေအတွက် 12% ဖြစ်သနည်း Setup ကို: 15 = .12 X ကိုလုံး
နမူနာ: 257အဘယ်သို့ရာခိုင်နှုန်းကိုရသနည်း Setup ကို: 25 = ရာခိုင်နှုန်း X ကို 7
2. ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးတက်နှင့် Decrease
တစ်ရာခိုင်နှုန်းအတော်များများတိုးမြှင့်ဖို့, 100 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကို addတစ်ဒဿမကူးပြောင်းနှင့်
များပြား။ 60 ရာခိုင်နှုန်း 25 တိုးမြှင့်ဖို့, ရာခိုင်နှုန်းကို 25 100 ရာခိုင်နှုန်းကို 125 ကူးပြောင်းနှင့် 1.25 အားဖြင့်များပြား 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်ပါ။ 1.25 X ကို 60 = 75 ။
တစ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းခြင်းမပြုမီမူလမြေတပြင်လုံးကိုရှာဖွေတစ်ခုညီမျှခြင်းကို set up ။ စဉ်းစားကြည့်ပါ
17x အဖြစ် x ကိုကျော်တစ်ဦး 1.17 ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုး၏ရလဒ်။
နမူနာ: တစ် 75 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာပြီးနောက်လူဦးရေ 5,879 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အသီးအနှံကိုရှေ့တော်၌ထိုလူဦးရေအဘယ်အရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Setup ကို: 1.07x = 5,879
မျိုးစုံရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်လျော့နည်းစေ၏ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်, 100 နှင့်အတူစတင်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်။
နမူနာ: တစ်ဦးကစျေးနှုန်းတစ်နှစ် 12 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တက် သွား. , သစ်ကိုစျေးနှုန်းလာမည့်နှစ်တွင် 24 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တက်သွားလေ၏။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးကဘာလဲ
setup ကို: ပထမဦးဆုံးတစ်နှစ်: 100 + (12 ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်း) 112 = ။
ဒုတိယနှစ်တွင်: 112 + (24 ၏ 112 ရာခိုင်နှုန်း) = 139 ။
ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးစုစုပေါင်း 39 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာပါတယ်။
Cardinal number, ထုံးစံနံပါတ်များ, ရက်စွဲများ, အပိုင်းအစများ, ဒဿမ, ရာခိုင်နှုန်း, ဂဏန်းသင်္ချာ, '0' 'ဟု
အောက်တိုဘာလ 21, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
379 = သုံး တရာ နှင့် ခုနှစ်ဆယ့်ကိုး
2,860 = နှစ်ခု တထောင် ရှစ်ရာ နှင့် ခွောကျဆယျ
5,084 = ငါးထောင်ရှစ်ဆယ်လေး
470,000 = လေးရာ နှင့် ခုနစ်သောင်း
2,550,000 = နှစ်ခု သန်း, ငါးရာ နှင့် ငါးဆယ်တထောင်
3,000,000,000 = သုံး ဘီလီယံအထိ
မှတ်စု: သူတို့တစ်တွေအရေအတွက်က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အခါမျှမအများကိန်းရဲ့ '' တရာ, အထောင်အသောင်း, သန်းနှင့်ဘီလျံခန့်အကြာတွင်ရှိပါသည်။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တွင်, သူတို့က, ဥပမာအများကိန်းနိုင်ပါတယ် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူများ; သန်းပေါင်းများစွာသော အင်းဆက်ပိုးမွှား၏။
ကျနော်တို့ရေးလိုက်4ဇန္နဝါရီလ (သို့မဟုတ် 4th ဇန်နဝါရီလ), ဒါပေမဲ့ဟုဆို ဇန်နဝါရီလ၏စတုတ္ထ or ဇန်နဝါရီလစတုတ္ထ။
ကျနော်တို့ရေးလိုက် 21 မေလ (သို့မဟုတ် 21st ) May, ဒါပေမယ့်ပြောပါ မေလနှစ်ဆယ်-ပထမဦးဆုံး or နှစ်ဆယ်ပထမဦးဆုံးအမေ။
1997 = ကိုးကိုးဆယ်ခုနစ်ခု
1905 = ကိုးရာငါးနှစ် or ကိုး Oh ငါးယောက်
1 1 /4= တဦးတည်းနှင့် လေးပုံတပုံ
1 1 /2= တဦးတည်းနှင့် တစ်နှစ်ခွဲ
13/4= တဦးတည်းနှင့် လေးပုံသုံးပုံ
1 1 /3= တဦးတည်းနှင့် တတိယ
1.25 = တဦးတည်း အမှတ် နှစ်ခုငါးခု
1.5 = တစျခုပွိုင့်ငါးခု
1.75 = တစျခုပွိုင့်ခုနစ်ခုငါးခု
1.33 = တဦးတည်းအချက်သုံးသုံး
26% = နှစ်ဆယ်ခြောက် ရာခိုင်နှုန်း
ထက်ပိုပြီး 50% အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အများစု; ထက်ငယ်သော 50% is လူနည်းစု။
လေးအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များရှိပါသည် အထဲကအလုပ်လုပ် ပြဿနာတစ်ခု (= တွက်ချက်):
+ = ထို့အပြင် ဥပမာ6+ =410 (ခြောက်လ ပေါင်း / နှင့် လေး ညီမျှ / နေသည် တဆယ်)
- = အနုတ်င.g ။ 6-4 =2(ခြောက်လ အနှုတ် လေးတန်းတူ /) နှစ်ခုဖြစ်ပါသည်
X = အမြှောက်အီး.g ။6X4= 24 (ခြောက်လ ကြိမ် / မြှောက် လေးတန်းတူ /) နှစ်သောင်းလေးဖြစ်ပါသည်
/ = ကွဲပြားခြင်းက e.g ။4/2=2(လေး ဖွငျ့ခှဲခွား နှစ်ခုတန်းတူ /) နှစ်ခုဖြစ်ပါသည်
''0'' ဟု
တယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 603 724 = ခြောက်လ oh သုံးခုနစ်ပါးနှစ်ခုလေးခု (AmEng = ခြောက်လ သုည သုံး)
သင်္ချာ: 0.7 = အချည်းနှီး ပွိုင့်ခုနစ်ခု, 6.02 = ခြောက်လအမှတ် oh နှစ်ခု
အပူချိန်: -10 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီဂရီ = တစ်ဆယ်ဒီဂရီ သုည / အနုတ်တဆယ်ဒီဂရီ
ဘောလုံး: 2-0 = နှစ်ခု nil
တင်းနစ်: 40-0 = လေးဆယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
မတ်လ 10, 2017 စက်တင်ဘာလ 25, 2013 by ကလေးတွေကအဘို့အဘိဓါန်
60 စက္ကန့် (စက္ကန့်) = 1 မိနစ် (မိ)
60 မိနစ် = 1 နာရီ (နာရီ)
24 နာရီ = 1 နေ့က
7 ရက်ပေါင်း = 1 အပတ်က
4 ရက်သတ္တပတ် (ခန့်။ ) = 1 လ
(ခန့်။ ) 365 ရက်ပေါင်း = 52 ရက်သတ္တပတ် = 12 လအတွင်း = 1 တစ်နှစ်
10 နှစ်ပေါင်း = 1 ဆယ်စုနှစ်
100 နှစ်ပေါင်း = 1 ရာစု
10 မီလီမီတာ (mm) = 1 စင်တီမီတာ (စင်တီမီတာ)
100 စင်တီမီတာ = 1000 မီလီမီတာ = 1 မီတာ (ဍ)
1000 မီတာ = 1 ကီလိုမီတာ (ကီလိုမီတာ)
100 စတုရန်းမီလီမီတာ (mm2) = 1 စတုရန်းစင်တီမီတာ (cm2)
10,000 cm2 = 1 စတုရန်းမီတာ (m2)
10,000 m2 = 1 ဟက်တာ (ဟက်တာ)
1000 ကုဗမီလီမီတာ (mm3) = 1 ကုဗစင်တီမီတာ (cm3)
1,000,000 cm3 = 1 ကုဗမီတာ (m3)
1000 milliliters (mL) = 1 လီတာ (L)
1000 L ကို = 1 kiloliter (kl)
1000 မီလီဂရမ် (မီလီဂရမ်) = 1 ဂရမ် (ဆ)
1000 ပါ g = 1 ကီလိုဂရမ် (ကီလိုဂရမ်)
1000 ကီလိုဂရမ် = 1 မက်ထရစ်တန်ချိန် (t)
(ကို C °) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေကို C = ခဲမှတ်° 0
ကို C = ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဒီဂရီ 37
ရေကို C = ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်° 100